जर्मनीद्वारा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीमा प्रतिबन्ध ! « Surya Khabar
जर्मनीद्वारा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीमा प्रतिबन्ध !
बर्लिन । जर्मन सरकारले सन् २०३० देखि पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जर्मनीको संसद ९बुन्डेसर्याट० ले पास गरेअनुसार सन् २०३० देखि जर्मनीमा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने इन्जिन आयात, निर्यात तथा बिक्री गर्न पाइने छैनन्।
इयूका अटोमोबाइल कम्पनीहरुलार्ई पनि यसबारे सूचना दिइनेछ। जर्मनीका चर्चित कार निर्माता कम्पनीले अडी, बीएमडब्लु, मर्सिडिज बेन्ज, पोर्शे, फक्सवागन विश्वका प्रमुख देशमा राम्रो बजार लिएका छन्। एजेन्सी